Osoo hin dhihin garee Lammaa Magarsaa afaan Komaand Poostiitii buusuu qabna - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Osoo hin dhihin garee Lammaa Magarsaa afaan Komaand Poostiitii buusuu qabna
Osoo hin dhihin garee Lammaa Magarsaa afaan Komaand Poostiitii buusuu qabna
Garee Lammaa Magarsaa Woyyaaneen rukutamuu jalaa baraaruun akka qabsoo Oromoo kufaatii jalaa baraaruutti fudhatamuu qaba
Woyyaaneen yeroo kanatti kan xiyyeeffatte KFO fi ABO irratti osoo hin taane garee Lammaa Magarsaa irratti. Kuni maaliif? Ammatti KFO fi ABO caalaa kan Woyyaanetti qormaata heddummeesse, jiruu itti hadheesse, kufaatii isii saffisiise garee Lammaa ta’uu qajeelatti waan hubatteef. Kanaaf hujii isii isa jalqabaa garee Lammaa laamshessuu fi Oromoon gargarbaasuu godhatte. Dhugaa kana maaliif arguu dadhabne nuti? Ammas maaliif garee Lammaa abaaruu hujii godhanna? Maaliif qilleensa siyaasaa faanaa tankaarfachuuf rakkanna? Maaliif garee Lammaa dadhabsiisuu irratti xiyyeeffanne? Gareen Lammaa duras deeggarsa ummataan bakka kana gaye. Ammas deeggarsa ummataa cimaadhaan alatti qarriffaa Woyyaanee keessaa bayuu hin danda’u. Yoo deeggarsa ummataa amansiisaa argate qofa gareen Lammaa kan Agaazii Poolsii Oromiyaa irraa ittisu, kan sabboontotaa fi kantiibota hidhamuu fi hujii irraa ari’amuu irraa hanbisu. Bakka ufii humna hin qabnetti, humni isaanii deeggarsa ummataati, qabsoo Oromoof mitii miseensota isaaniitiif birmachuu hin danda’an. Bakka deeggarsi Oromoo bira hin jirretti, isaan sodaatuu mitii, eennutu isaan dhagaya?
Raawwii bara 2017 irra dhaabannee Lammaa fi Abiyyiin yoo ilaalle diina afoo dhaabachuu fi saba isaaniif waa hojjachuudhaaf carraaqaniiru. Silaa qabsoo keessatti yeroo hunda milkaayuun hin jiru. Amma, gareen kun kan jiru dhiibbaa diinaa hamaa jala. Akka garee kanatti hin cal’isne jaarmayni biraa cimaan ammatti qabsoo tana fuudhee fundurattiin deemu hin jiru. Humna KFOs beektu. Kana ABOs ifa. Qerroonis deeggarsa keessaa fi alaa barbaaddi. Yoo baatii lama duras nutti mudhatuu dhabe, amma hundi ifa. Gareen Lammaa deeggarsa laataa ture malee qabsoo Oromootti gufuu hin taane. Labsiin Yeroo Muddamaa si’a 6 fashaleessanis 7ffaa irratti moo’atamaniiru. Yaalii godhaa turanii fi ummata Oormootti makamuu isaaniitiif amma kunoo gatii guddaa kaffalaa jiru. Yeroon kuni garee Lammaaf yeroo ulfaataadha. Yeroo deeggarsa tooftaa cimaa saba isaanii irraa argachuu qabanitti, gariin qoxxeef, inni biraa hubannaa fi bilchina siyaasaa dhabuun, garee kana diinni akka rukutuuf balbala saaqne. Yeroo isaan deeggarsa nurraa barbaadanitti dudda itti laachuun sirrii miti. Akka mixii wolqabannu malee gaara fundura keenna jiru kana bayuun akka hin danda’amne ABO, KFO, ODF, KWO fi aktivistoonni beekuu qabu. Baramara hallayyaa gabrummaa keessa jiraachuun ammoo filannoo Oromoo miti. Akki amma itti deemaa jirru gara olfudhannee hallayyaa seenutti nu geessuu mala.
Sa’aa kanatti OPDO bakka hamaa jirti. EPRDF keessaa gadi baatus ni nyattamti, ni rukutamti. Akka isii gadi baatee dirree irra deemtuuf Woyyaaneen hin hayyamtu. EPRDF keessa teettus akkuma arginu kana itti taphatama. EPRDF keessa bayuun duratti OPDO bu’uurri isii abdachiisaa ta’uu qaba. Abdachiisaa kan ta’u ammoo yoo yeroo gayaa argattee hujii ifatti mul’atu Oromoof hojjatteedha. Kuni deeggarsa ummataa quubsaa isaaniif argamsiisa. Gaafa kana laphee dhiibdee EPRDF keessaa baatus namni isii tuqu hin jiru. Hala amma jiru kanatti woraana hin qabdu. Deeggarsi ummataas kan abdiin irratti gatamuu miti. Gaafa itti tole ni deeggara. Gaafa kaan akka ummannii hin deeggarreefis irratti duulla. Haala kana keessatti EPRDF keessaa baatee taanaan dhumni isii naachaan nyaatamuu qofa. Gidiraa hoogganoota aantummaa sabaa qabanii fi Poolisii Oromiyaa irra gayaa jiru ni arginaa mitii? Kuni kan ta’eef Lammaan fedhii miseensa isaa tiksuu dhabee osoo hin taane humni Agaazii afoo ittiin dhaabatu waan hin jirreef. Hunda kan dursuu qabu garee Lammaa cimsuudha. Kuni kan dhugoomu yoo deeggarsa Oromoo argate qofa. Kunis kan ta’uu qabuuf haala amma jiru kana keessatti, wolsobuu yoo hin taane, jaarmayni cimee as bayee Oromoo rakkoo hamaa kan akeessa baasaru hin jiru. Hundi keenna akkuma qancarretti teennee wolilaaluuf deemna. Qeeroos gatii guddaa kaffalchiisaarra.
Hawwiin qofti hin hojjatau. Osooo akka hawwii fi dhaadannootii qaata bilisoomne. Injifannoon tarsiimoo fi tooftaa keessaa madditi. Qabsoon Oromoo fiixa akka baatu kan hawwu hundi garee Lammaa Woyyaaneen nyaattamuu irraa baraaruuf hojjachuu qaba. Yeroo kanatti garee Lammaa Magarsaa Woyyaaneen rukutamuu jalaa baraaruun akka qabsoo Oromoo kufaatii jalaa baraaruutti fudhatamuu qaba.
Previous articleWoyyaaneen Dammaqaa MM godhuuf: Teennee ilaalla moo Dr. Abiyyi akka filatamuuf dhiibbaa goona?
Next articlePaarlaamaan Sanbata Dr Abiyyi Ahmadiin Muummicha Ministeraa godhee filata